TANORA SY NY FOMBAN-DRAZANA | Zouboon
TANORA SY NY FOMBAN-DRAZANA
Filed under: Uncategorized — zouboon @ 11:01
Nandeha ny volana, niova ny taona dia nanaraka izay ihany koa ireo fomba amam-panao maro isankarazany. Ireo tanora izay miaina amin’ny vanim-potoana ankehitriny dia efa tsy mahatsirao ireo fomban-drazana nisy teo aloha intsony ny ankamaroany. Lasa miova araka izay zava-misy amin’ny fiainana andavan’andro ny fombafomba rehetra. Lazaina fa efa lany andro daholo ireo fomban-drazany nisy teo aloha. Vokany, miova araka izay ihany koa ny toe-tsaina anan’ireo tanora. Mety hihatsara ary na koa mety hiharatsy ihany koa.
Raha ny zavatra tsikaritra aloha dia tsapa fa tsy voatery ho zavatra ratsy izany fiovana amin’ny fomba netin-drazana teo aloha izany, saingy betsaka no mihevitra fa tsy fanajana ireo olo-be teo aloha ny fandaovana ireny fomba ireny. Vokany betsaka ny tanora ankehitriny no mampifangaro ny fomban-drazana amin’ny fomba vaovao, izay heverina fa fomba vahiny. Ohatra akaiky amin’izany ny fanambadiana. Taloha tsy nisy mihitsy izany hoe “fiançailles” izany. Ankehitriny anefa dia samy atao daholo na vodiondry na ity fomba nolazaina teo aloha ity. Hajaina izany ny fomban-drazana nefa manaraka ny toe-trandro ihany koa. Raha amin’ny ankapobeny dia ireo tanora monina any ambanivohitra aloha no mbola betsaka fatra-panaja ny fomban-drazana. Ireo aty andrenivohitra kosa efa nahita akanga tsara soratra ka nanary akoho tamana an-trano ny ankamaroany. Nindaosin’ny sivilizasiona hono e!
Ka tsy an-tany tsy am-parafara ihany anie izy ity e. Androany: « mila mivoatra, manaraka ny toetr’andro » hono e; ny ampitso « tena very ny soa toavina malagasy ». Sao kosa aza dia ny tsy fahampian’ilay fampahafantarana ilay soa toavina malagasy no mahatonga izany e – toa rehefa misy zavatra atao vao misy olon-dehibe tonga avy any hoe tsy maintsy manao an; izao fa izany ny fomba malagasy, kanefa ireto erotrerony efa aman-taonany maro no niaina tao anatin’ilay fomba vaovao hany ka misy ny fandavana io fomba taloha io
Commentaire par saveoursmile — juillet 27, 2009 @ 1:20
marin’izay fa aleo fotsiny angaha ato hoe tsy afa-miaina raha tsy amin’ny zava-misy ny olom-belona, lny asa tsy hiverina intsony ko!!!
Commentaire par zouboon — juillet 28, 2009 @ 9:46
Tsy fantatra intsony izay tena marina e
Commentaire par pakysse — juillet 28, 2009 @ 1:06
Marina zany fa anjaranaozy
Commentaire par Farilac — février 27, 2014 @ 6:36
Miombi-kevitra amin’i Saveoursmile aho. Eo ko ny adidin’ireo izay mahalala ny fomba (ny teny gasy ao anatiny) mba hampiroborobo azy. Ny volana jona zao ho an’ny teny Malagasy nefa nangingina be izany, vitsy mpahafantatra. Ny kabary zao no efa hitako hoe mahasintona ny tanora.
Commentaire par Tahina — juillet 29, 2009 @ 7:11
IL FAUT VALORISER LES MIENS MAIS FAUT PAS MINIMISER LES AUTRES !!
Commentaire par Farilac — février 27, 2014 @ 6:38